Ikhaya - Hinds Feet Farm
Xhumana nathi: 704-992-1424 (Huntersville) noma 828-274-0570 (Asheville)
Umlando: Indaba kaPuddin
Uhlelo lwezindawo zokuhlala
Lena indawo ka-Puddin
Uhlelo Lokugibela Lokwelapha
Ukuqaqa Ukulimala Kobuchopho
Uhlelo Losuku Olubonakalayo
Ivolontiya kanye ne-Intern
NJENGAMANJE ZIYAMUKELA IZICELO
NGOHLELO LWETHU LOSUKU OLUBONAKALAYO Faka isicelo lapha!
Kunikezelwe ekusizeni abantu abaphila nokulimala kwengqondo.
Umgomo wethu uwukukhulisa amathuba okulimala ngemva kokulimala kwabantu abaphila nokulimala kwengqondo ngezinhlelo ezididiyelwe, eziyingqayizivele neziphelele; ukuvumela amalungu ethu ukuba enze imisebenzi enenjongo kuyilapho ethuthukisa umuzwa wokuba ngowasekhaya nasemiphakathini ezungezile. Sizowufeza lo msebenzi ngezinhlelo ezihlukile, ezigxile kumuntu, ngemuva kokuhlunyeleliswa, nezinhlelo ezigxile emphakathini.
Bheka umbiko wethu Wonyaka ka-2021
Izinhlelo Zosuku Nezindawo Zokuhlala
Usuku lwe-Hinds' Feet Farm kanye nezinhlelo zokuhlala ziwushintsho olungenangqondo ukusuka kumodeli yokwelapha yendabuko yabantu abaphila nokulimala kwengqondo ukuya kumodeli ehlanganisa indlela ephelele yezempilo nempilo enhle, enika amalungu amandla maqondana nomsebenzi kanye nenjongo yokuphila ngemva kokulimala. Idalwe, futhi, abantu abaphila namalungu alimele ebuchosheni babamba iqhaza ngokugcwele kuyo yonke ingqalasizinda yohlelo.
Our Izinhlelo Zosuku zigxile ekusizeni ilungu ngalinye ukuthi lithole “okusha” kwalo ngohlelo olushukumisayo olusekelwe kusayithi nolwemiphakathi olugxile emisebenzini yokuqonda, yokudala, engokomzwelo, engokomzimba, engokwenhlalo neyangaphambi kwemisebenzi yezandla. Izinhlelo zethu zosuku zitholakala kuzo zombili Huntersville futhi Asheville, ENyakatho Carolina.
Lena indawo ka-Puddin iyikhaya lesimanjemanje, elinemibhede engu-6 yokunakekela umndeni yabantu abadala abanokulimala okudabukisayo noma okutholwe ebuchosheni. Leli khaya lakhelwe futhi linabasebenzi ukuze babhekane nezidingo eziyinkimbinkimbi zabantu abadinga usizo olulinganiselwe kuya phezulu ngemisebenzi yabo yokuphila kwansuku zonke (ADLs). I-Puddin's Place isendaweni yethu yaseHuntersville.
I-Hart Cottage iyikhaya elihlala elinemibhede emi-3 eliklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo zabantu abadala abalimele ebuchosheni abazimele nazo zonke izinto zokuphila kwansuku zonke (ama-ADL), nokho abadinga usizo nokugadwa okumaphakathi kuya kokuphakathi ukuze bafeze imisebenzi futhi bahlale bephephile. I-Hart Cottage itholakala ekhempasini yethu yaseHuntersville.
Amalungu ohlelo lwezindawo zokuhlala ayakhuthazwa ukuthi azibandakanye, ahlanganyele futhi abambe iqhaza emisebenzini eqhubekayo yezinhlelo zosuku.
Usizo Lwakho Luyadingeka
Umnikelo owodwa wenza umehluko omkhulu.
Ukwesekwa kwakho kwanyanga zonke kuzosisiza ukuthi siqhubeke nokuhlinzeka ngezinhlelo eziyingqayizivele nezisha kubantu abadala abalimele ebuchosheni kanye nemindeni yabo
Chofoza LAPHA ukuze ufunde indlela yokusekela i-Hinds' Feet Farm!
"Ngesikhathi ngilimala okokuqala, ngagxuma ngaya ezindaweni ezahlukene zokulungisa isimo. Ngangithukuthele emhlabeni futhi ngifuna ukuya ekhaya. Ekugcineni, kufanele wamukele ukulimala kanye nobunzima bakho. Ngifunde ukubekezela kubantu abaseduze kwami ​​futhi mina."
"Angikwazi ukwenza izinto engangikade ngikwazi ukuzenza, kodwa ngithola imizila emisha nezindawo zokuhlala ukuze ngikwazi ukwenza lezo zinto."
"Ngizakhele abangani abaningi ePulazini. Abanye abahlanganyeli bonke banobungane, futhi ngiyakujabulela ukuba nabo. Ngiyakuthanda nokuxhumana nabasebenzi. Sijabula kakhulu ndawonye."
"Angikwazi ukwenza lokhu ngedwa, kodwa mina kuphela engingakwenza lokhu. Futhi, ukuba phakathi kwabantu abafana nami kungifundise ukubekezela ukuvula amehlo ami futhi ngibone abanye ngokunye ukukhanya."
"Uhlelo losuku lube negalelo elikhulu empilweni yami. Lunginike inkululeko eyanele yokwenza nokufunda emaphutheni ami."
"Indlela yenu yobuntu yokwakha inhlonipho, ukuzethemba nokuhloniphana phakathi kwamalungu, abasebenzi nabazali igqama ngaso sonke isikhathi lapho sivakasha."
"Ukhule kakhulu kule minyaka edlule ngezindlela eziningi. Unomphakathi e-Hinds Feet Farm wabangane kanye nokuhlangenwe nakho okumsiza ukuba aphumelele, akhule futhi abe nempilo ejabulisayo."
Hlangana ne-Huntersville Intern yethu, uMaggie!
Hlangana no-Asheville Intern wethu, u-Alex!
Hlangana ne-Allied Health Intern yethu, Natalia!
Mashi 1, 2022
Hlangana ne-Huntersville Day Programme Intern yethu, Lauren!
BHALISA UHLU LWETHU LWE-IMEYILI!
Copyright © 2020 Hinds Feet Farm. Wonke Amalungelo Agodliwe. Dizayina nge Umehluko Wakhiwe.
I-Hinds' Feet Farm iyinhlangano engenzi nzuzo engu-501 (c) 3.